Le webhusayithi yeyabanini kwaye iqhutywa yiJudine Motors CC
IJudine Motors CC iyayihlonipha imfihlo yakho kwaye izimisele ukuyikhusela ngalo Mgaqo-nkqubo Wabucala.
Umgaqo-nkqubo wabucala ulawula ukufikelela kwakho kunye nokusetyenziswa kwejudinemotors.co.za ("iWebhusayithi"), kubandakanya nawuphi na umxholo, ukusebenza kunye neenkonzo ezinikezelwa kwi "Website", nokuba ulundwendwe okanye umsebenzisi obhalisiweyo.
Xa ungena kwiWebhusayithi, iNkampani iya kufunda ulwazi oluthile malunga nawe, ngokuzenzekelayo nangokuzenzekelayo ngamanyathelo onokuwathatha, ngexa lotyelelo lwakho. Lo mgaqo-nkqubo usebenza kulwazi esiluqokelela kwiWebhusayithi nakwimeyile, isicatshulwa, okanye eminye imiyalezo ye-elektroniki phakathi kwakho neWebhusayithi.
Nceda ufunde uMgaqo-nkqubo wabucala ngononophelo ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa iWebhusayithi. Ngokusebenzisa iWebhusayithi okanye ngokunqakraza ukwamkela okanye ukuvuma iMigqaliselo yokuSebenzisa xa olu khetho lwenziwe ukuba lufumaneke kuwe, uyayamkela kwaye uyavuma ukuba ubotshiwe kwaye ugcine Umgaqo-nkqubo Wabucala. Ukuba awufuni kuvuma kuMgaqo-nkqubo Wabucala, awunakufikelela okanye usebenzise iWebhusayithi.
IINKCUKACHA SIQOKELELA NGAKHO
Xa ungena kwiWebhusayithi, iNkampani iya kufunda ulwazi oluthile malunga nawe xa undwendwele.
Indawo yeWebhusayithi ibonelela ngeendawo ezahlukeneyo zabasebenzisi zokubonelela ngolwazi. Siqokelela ulwazi olunikezelwa ngabasebenzisi ngokugcwalisa iifom kwiWebhusayithi, ukunxibelelana nathi ngeefom zonxibelelwano, siphendula kuphando, imibuzo yokukhangela kwindawo yethu yokukhangela, sinike izimvo okanye enye ingxelo, kwaye sinike ulwazi xa si-odola imveliso okanye inkonzo ngeWebhusayithi .
Sisebenzisa ulwazi osinike lona ukuhambisa imveliso oyicelileyo kunye / okanye inkonzo, ukuphucula ukusebenza kwethu ngokubanzi, kunye nokubonelela ngezibonelelo, ukunyuselwa kunye nolwazi.
Ulwazi esiluqokelela ngeTekhnoloji yokuQokelelwa kweDatha ngokuzenzekelayo
Njengoko uhamba kwiWebhusayithi yethu, sinokusebenzisa ubuchwephesha bokuqokelela idatha ngokuzenzekelayo kubandakanya noGoogle Uhlalutyo ukuqokelela ulwazi oluthile malunga nezixhobo zakho, isenzo sokukhangela kunye neepateni. Oku kuyakubandakanya ngokubanzi ulwazi malunga nendawo okuyo, indlela yakho yezithuthi kwiwebhusayithi yethu, kunye nalo naluphi na unxibelelwano phakathi kwekhompyuter yakho kunye neWebhusayithi yethu. Phakathi kwezinye izinto, siya kuqokelela idatha malunga nohlobo lwekhompyuter oyisebenzisayo, uqhagamshelo lwakho lwe-Intanethi, idilesi ye-IP, inkqubo yakho yokusebenza, kunye nohlobo lwesikhangeli sakho.
Ulwazi esiluqokelela ngokuzenzekelayo lusetyenziselwa idatha yeenkcukacha-manani kwaye ayizukubandakanya ulwazi lomntu. Sisebenzisa le datha ukuphucula iWebhusayithi yethu kunye neminikelo yethu yenkonzo. Ukuya kuthi ubonelele ngokuzithandela iinkcukacha zakho kuthi, iinkqubo zethu ziya kudibanisa ulwazi oluqokelelwe ngokuzenzekelayo kunye nolwazi lwakho lobuqu.
UKUSETYENZISWA KWEEKHOKI NEEPHELISI
Ngokufana nezinye iiwebhusayithi zentengiso, iwebhusayithi yethu isebenzisa itekhnoloji esemgangathweni ebizwa ngokuba yi "cookies" kunye neelog logs ukuqokelela ulwazi malunga nendlela esetyenziswa ngayo indawo yethu. Ulwazi oluqokelelwe ngecookie kunye nelogs zeseva zinokubandakanya umhla kunye nexesha lokundwendwela, amaphepha ajongiweyo, ixesha elichithwe kwindawo yethu, kunye neewebhusayithi ezityelelwe nje ngaphambili nasemva kwezethu, kunye nedilesi ye-IP.
Icookie luxwebhu oluncinci kakhulu, oluhlala lubandakanya isazisi esikhethekileyo esingaziwayo. Xa undwendwela iwebhusayithi, loo ndawo ikhomputha icela ikhompyuter yakho imvume yokugcina le fayile kwinxalenye yediski yakho eyenzelwe ngokukhethekileyo ikuki. Iwebhusayithi nganye inokuthumela ikuki yayo kwisikhangeli sakho ukuba ukhetho lomkhangeli wakho luyayivumela, kodwa (ukukhusela imfihlo yakho) isikhangeli sakho sivumela kuphela iwebhusayithi ukuba ifikelele kwiicookies esele zikuthumele, hayi ii-cookies ezithunyelwe kuwe ngamanye amasayithi .
Inkampani inelungelo lokusebenzisa ezobuchwephesha ezilingana neicookies, kubandakanya iipikseli zemidiya yoluntu. Ezi pixels zivumela amaziko eendaba ezentlalo ukuba alandelele iindwendwe kwiiwebhusayithi ezingaphandle ukuze zilungelelanise imiyalezo yokuthengisa abasebenzisi ababonayo ngelixa betyelele iwebhusayithi yemidiya yoluntu. Inkampani inelungelo lokusebenzisa ezi pixels ngokuthobela imigaqo-nkqubo yeendawo zosasazo zasekuhlaleni ezahlukeneyo.
UKUSETYENZISWA KWEEKHOKHILE KWESITHATHU
Eminye imixholo okanye usetyenziso, kubandakanya iintengiso, kwiWebhusayithi zinikezelwa ngabantu besithathu, kubandakanya abathengisi, iinethiwekhi zentengiso kunye neeseva, ababoneleli bokuqukethwe kunye nabanikezeli besicelo. La maqela esithathu anokusebenzisa iicookies zodwa okanye ngokudibeneyo kunye neebhakoni zewebhu okanye obunye ubuchwephesha bokulandela umkhondo ukuqokelela ulwazi malunga nawe xa usebenzisa iwebhusayithi yethu. Ulwazi abaluqokelelayo lunokudityaniswa nolwazi lwakho lomntu okanye banokuqokelela ulwazi, kubandakanya ulwazi lomntu siqu, malunga nezinto ozenzayo kwi-intanethi ekuhambeni kwexesha nakwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kunye nezinye iinkonzo ze-Intanethi. Banokusebenzisa olu lwazi ukubonelela ngentengiso esekwe kumdla (kwindlela yokuziphatha) okanye umxholo othile ojolise kuwo.
Asizilawuli ezi teknoloji zokulandela umkhondo zomntu wesithathu okanye ukuba zinokusetyenziswa njani. Ukuba unemibuzo malunga nentengiso okanye umxholo othile ekujoliswe kuwo, kuya kufuneka unxibelelane ngqo nomboneleli onoxanduva.
Ukuba ukhetha ukudibana nathi nge-imeyile, sinokugcina umxholo wemiyalezo yakho ye-imeyile kunye nedilesi ye-imeyile kunye neempendulo zethu. Sibonelela ngokhuseleko olufanayo kolu nxibelelwano lwe-elektroniki esilusebenzisayo kugcino lolwazi olufunyenwe kwi-intanethi, iposi kunye nomnxeba. Oku kuyasebenza xa ubhalisa kwiwebhusayithi yethu, ubhalisela nayiphi na ifom usebenzisa idilesi ye-imeyile okanye uthenge kule ndawo. Ngolwazi oluthe kratya jonga imigaqo-nkqubo ye-imeyile engezantsi.
Sizimisele ukugcina idilesi yakho ye-imeyile iyimfihlo. Asizithengisi, asiqeshisi, okanye siqeshise uluhlu lwethu lokubhalisa kubantu besithathu, kwaye asizukuyichaza idilesi ye-imeyile kuye nawuphi na umntu wesithathu ngaphandle kokuba kuvunyelwe kwicandelo elibizwa ngokuba yiNgcaciso yeNgcaciso yakho.
Siza kugcina ulwazi oluthumela nge-imeyile ngokungqinelana nomthetho osebenzayo.
Ngokuhambelana nomthetho we-CAN-SPAM, zonke ii-imeyile ezithunyelwe zivela kumbutho wethu ziya kuchaza ngokucacileyo ukuba i-imeyile ivelaphi kwaye zinike ulwazi olucacileyo malunga nendlela yokunxibelelana nomthumeli. Ukongeza, yonke imiyalezo ye-imeyile iya kuba nengcaciso emfutshane malunga nendlela yokuzisusa kuluhlu lwethu lwee-imeyile ukuze ungafumani luqhakamshelwano nge-imeyile kuthi.
Ii-imeyile zethu zinika abasebenzisi ithuba lokuphuma ekufumaneni unxibelelwano oluvela kuthi kunye namaqabane ethu ngokufunda imiyalelo yokungabhalisi ebekwe ezantsi kuyo nayiphi na i-imeyile abayifumana kuthi nanini na.
Abasebenzisi abasenqweneli ukufumana incwadana yeendaba okanye izinto zokwazisa banokukhetha ukufumana ezi zonxibelelwano ngokunqakraza kwikhonkco elingabhaliswanga kwi-imeyile.
SIQOKELELA NJANI IINKCUKACHA
Inkampani iqokelela ulwazi lwakho ukuze irekhode kwaye ixhase ukuthatha kwakho inxaxheba kwimisebenzi oyikhethileyo. Ukuba ubhalisela ukukhuphela incwadi okanye izixhobo, bhalisela ileta yethu yeendaba, kunye / okanye uthenge imveliso kuthi, siqokelela ulwazi lwakho. Sisebenzisa olu lwazi ukulandela izinto ozikhethayo kunye nokugcina ulwazi malunga neemveliso kunye neenkonzo ozikhethileyo ukuba uzifumane kunye nazo naziphi na iimveliso ezinxulumene noko kunye / okanye iinkonzo. Njengondwendwe kule Webhusayithi, unokuzibandakanya kwizinto ezininzi ngaphandle kokubonelela ngalo naluphi na ulwazi lomntu. Kuphela kuxa ufuna ukukhuphela izixhobo kunye / okanye ukubhalisela iinkonzo apho kuya kufuneka unikezele ngolwazi.
Ukuba ungaphandle kwe-European Union kwaye ukhetha ukufumana naziphi na izixhobo zasimahla, thatha inxaxheba kuzo naziphi na iinkqubo zoqeqesho zasimahla, ubhalise kwi-webinar, ubhalise kwisiganeko esiphilayo, ubhalise kwisemina, okanye uthenge naziphi na iimveliso ezithengiswa yiNkampani kule Webhusayithi, Siya kubhalisa ngokuzenzekelayo ukufumana ileta yethu ye-imeyile yasimahla. Ukuba awufuni kuyifumana le ncwadana, ungarhuma nanini na. Sifaka ikhonkco "lokungabhalisi" ezantsi kuyo yonke i-imeyile esiyithumelayo. Ukuba ukhe waba nengxaki yokungabhalisi, ungathumela i-imeyile ku
ucele ukungabhalisi kwii-imeyile ezizayo.
Ukuba ukwi-European Union kwaye ukhetha ukufumana naziphi na izibonelelo zasimahla, thatha inxaxheba kuzo naziphi na iinkqubo zoqeqesho zasimahla, ubhalise kwi-webinar, ubhalise kwisiganeko esiphilayo, ubhalise kwisemina, okanye uthenge naziphi na iimveliso ezithengiswa yiNkampani kule Webhusayithi, Siza kukubhalisela ukufumana ileta yethu yasimahla ye-imeyile ukuba uyayivuma ngokuqinisekileyo. Ukuba awufuni kuyifumana le ncwadana, ungarhuma nanini na. Sifaka ikhonkco "lokungabhalisi" ezantsi kuyo yonke i-imeyile esiyithumelayo. Ukuba ukhe waba nengxaki yokungabhalisi, ungathumela i-imeyile ku
SILUSEBENZISA NJANI ULWAZI Olusinika lona?
Sisebenzisa ulwazi lomntu siqu ngeenjongo zokubonisa iWebhusayithi yethu kunye nemixholo yayo kuwe, sikunika ulwazi, sikunika izibonelelo zeemveliso kunye neenkonzo, sikunika ulwazi malunga nemirhumo kunye neemveliso, senza nasiphi na isivumelwano phakathi kwakho neNkampani, Ukulawula imisebenzi yethu yeshishini, ukubonelela ngeenkonzo zabathengi, nokwenza ukuba kufumaneke ezinye izinto kunye neenkonzo kubaxumi bethu nakwabo banokuba ngabathengi.
Amaxesha ngamaxesha, sinokusebenzisa ulwazi osinike lona ukwenza izithembiso zokuthenga iimveliso kunye neenkonzo ezinikezelwa ngabantu besithathu endaweni yekhomishini ekufuneka ihlawulwe kuthi ngabantu besithathu. Ukuba ukhetha ukuthatha inxaxheba kulonyuselo olunjalo, abantu besithathu baya kufumana ulwazi lwakho.
Amaxesha ngamaxesha, sinokusebenzisa ulwazi osinike lona ukubonisa iintengiso kuwe ezilungiselelwe iimpawu zakho zobuqu, umdla kunye nemisebenzi.
UKUVELA KWEENKCUKACHA ZAKHO
Njengomgaqo jikelele, asithengisi, asiqeshisi, asiqeshisi okanye ngenye indlela sithumele naluphi na ulwazi oluqokelelweyo nokuba luzenzekele okanye lukhona ngokuzithandela kwakho.
Singaziveza iinkcukacha zakho kubancedisi bethu, abaxhasi, kunye nabanikezeli beenkonzo ngeenjongo zokubonelela ngeenkonzo zethu kuwe.
Singaziveza iinkcukacha zakho kumntu wesithathu, kubandakanya igqwetha okanye iarhente yokuqokelela, xa kufuneka sinyanzelise imigaqo yethu yenkonzo okanye nasiphi na isivumelwano phakathi kwakho neNkampani.
Sinokubonelela ngolwazi lwakho kuye nawuphi na umntu oza kungena ezihlangwini zakhe ukuba abe nomdla kwimeko yokudibana, ukwahlulwa phakathi, ukulungiswa ngokutsha, ulungelelwaniso, ukuchithwa, okanye okunye ukuthengiswa okanye ukuhanjiswa kwezinye okanye zonke iiasethi zeNkampani kunye / okanye ishishini.
Singaluchaza ulwazi xa sinyanzelwe ngokusemthethweni ukwenza njalo, ngamanye amazwi, xa, ngentembeko, sikholelwa ukuba umthetho uyafuna oko okanye ukukhusela amalungelo ethu asemthethweni okanye xa sinyanzelwa yinkundla okanye elinye iqumrhu likarhulumente ukuba lenze njalo.
SIKHUSELA KANJANI KWIINKCUKACHA ZAKHO KUNYE NOKHUSELEKO LWEENKCUKACHA ZOLWAZI?
Sisebenzisa iindlela ezifanelekileyo zorhwebo ukuqinisekisa ukukhuseleka kolwazi osinike lona kunye nolwazi esiluqokelela ngokuzenzekelayo. Oku kubandakanya ukusebenzisa imigaqo-nkqubo yokhuseleko esemgangathweni kunye nokusebenza kuphela nabathengisi abadumileyo benkampani yesithathu. I-imeyile ayamkelwa njengesixhobo esikhuselekileyo sonxibelelwano. Ngesi sizathu, sicela ukuba ungathumeli ulwazi lwabucala kuthi nge-imeyile. Nangona kunjalo, ukwenza njalo kuvunyelwe, kodwa kumngcipheko wakho. Olunye ulwazi onokulufaka kwiwebhusayithi yethu lunokudluliselwa ngokukhuselekileyo kusetyenziswa indawo ekhuselekileyo eyaziwa njengeSerge Sockets Layer, okanye i-SSL. Ulwazi lweKhadi letyala kunye nolunye ulwazi olubuthathaka aluzange luhanjiswe nge-imeyile.
Inkampani inokusebenzisa iinkqubo zesoftware ukwenza isishwankathelo samanani, esetyenziselwa iinjongo zokuvavanya inani labakhenkethi kumacandelo ahlukeneyo esiza sethu, loluphi ulwazi olunomdla nolunomdla, ukumisela imigaqo yoyilo lobuchwephesha, kunye nokuchonga ukusebenza kwenkqubo okanye indawo ezinengxaki.
Ngeenjongo zokukhusela indawo kunye nokuqinisekisa ukuba le nkonzo ihlala ifumaneka kubo bonke abasebenzisi, iNkampani isebenzisa iinkqubo zesoftware ukujonga ukugcwala kwenethiwekhi ukuchonga iinzame ezingagunyaziswanga zokufaka okanye zokutshintsha ulwazi, okanye kungenjalo zenze umonakalo.
Umgaqo-nkqubo wethu ukuthumela naluphi na utshintsho esilwenzayo kumgaqo-nkqubo wethu wabucala kweli phepha. Ukuba senza utshintsho kwizinto eziphathekayo kwindlela esiziphatha ngayo iinkcukacha zabasebenzisi bethu, siya kukwazisa nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile echazwe kwiakhawunti yakho kunye / okanye ngesaziso kwiphepha lasekhaya leWebhusayithi. Umhla wokugqitywa komgaqo-nkqubo wabucala uchongiwe emazantsi ephepha. Unoxanduva lokuqinisekisa ukuba sinedilesi ye-imeyile esebenzayo nenokuhanjiswa, kunye nokutyelela iwebhusayithi yethu kunye nalo mgaqo-nkqubo wabucala ukukhangela naluphi na utshintsho.
AMALUNGELO EGDPR YABANDUZI
Ukuba ungaphakathi kwi-European Union, unelungelo lokufumana ulwazi oluthile kwaye unamalungelo athile phantsi koMmiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele.
La malungelo aquka:
Siza kugcina naluphi na ulwazi okhetha ukusinika lona kude kube yile: (a) xa usicela ukuba siyicime le ngcaciso, (b) isigqibo sethu sokuyeka ukusebenzisa ababoneleli beenkcukacha ezikhoyo, okanye (c) iNkampani ithathe isigqibo sokuba Ixabiso lokugcina idatha liphezulu kuneendleko zokugcina.
Unelungelo lokucela ukufikelela kwidatha yakho egcinwa yiNkampani kunye namalungelo okulungisa okanye ukucima idatha yakho yobuqu.
Unelungelo lokufuna izithintelo ekusebenzeni kwedatha yakho.
Unelungelo lokuphikisa ekuqhubekekeni kwedatha yakho kunye nelungelo ekuphatheni idatha yakho.
Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ubonelele ngemvume yenkampani ekusetyenzisweni kwedatha yakho yobuqu, unelungelo lokurhoxa loo mvume nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuchaphazela ukuba semthethweni kokuqhubekeka ngokusekwe kwimvume eyenzekileyo ngaphambi kokurhoxa kwemvume.
Unelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya elongameleyo elinamagunya kwimiba enxulumene noMmiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele.
Sifuna kuphela ulwazi olufunekayo ngokufanelekileyo ukuba ungene kwisivumelwano nawe. Asizukufuna ukuba ubonelele ngemvume yayo nayiphi na into engeyomfuneko njengoko imeko yokungena kwisivumelwano nathi.
IWebhusayithi yethu ayenzelwanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala. Akukho mntu ungaphantsi kweminyaka eli-13 onokuthi anike naluphi na ulwazi kwiWebhusayithi. Asazi ngabom ukuba siqokelela iinkcukacha zobuqu kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Ukuba uneminyaka engaphantsi kwe-13, sukusebenzisa okanye unikezele ngalo naluphi na ulwazi kule Webhusayithi okanye ngazo naziphi na iimpawu zalo / irejista kwiWebhusayithi, wenze naziphi na izinto ezithengiweyo kwiWebhusayithi, sebenzisa nayiphi na into yokunxibelelana okanye yokuphawula uluntu kule Webhusayithi okanye ukubonelela ngolwazi malunga nawe kuthi, kubandakanya igama lakho, idilesi, inombolo yomnxeba, idilesi ye-imeyile, okanye naliphi na igama lesikrini okanye igama lomsebenzisi onokulisebenzisa.
Ukuba sifunda ukuba siqokelele okanye safumana ulwazi lomntu siqu kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yomzali, siya kuyicima olo lwazi. Ukuba uyakholelwa ukuba singanalo naluphi na ulwazi malunga okanye malunga nomntwana ongaphantsi kwe-13, nceda unxibelelane nathi kule info@judinemotors.co.za.
Nceda uqaphele ukuba ezinye zonxibelelwano ezikwiwebhusayithi zizidibanisi ezihambelana nazo, kwaye ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kuwe, ndiza kufumana ikhomishini ukuba uthatha isigqibo sokuthenga. Nceda uqonde ukuba ndinamava nazo zonke iinkampani endizikhankanyileyo, kwaye ndiyazicebisa kuba ziluncedo kwaye ziluncedo, hayi ngenxa yekhomishini ezincinci endizenzayo ukuba uthatha isigqibo sokuthenga into. Nceda ungachithi mali kwezi mveliso ngaphandle kokuba uziva uzifuna okanye ziya kukunceda ufezekise iinjongo zakho.
IJudine Motors CC yamkela imibuzo okanye izimvo zakho malunga noMgaqo-nkqubo wabucala:
IJudine Motors CC C / O Rietfontein kunye neBass Street, eBoksburg West,
Gauteng, Mzantsi Afrika